Pyae Phyo (MMiTD): ♪ Pokemon Go စပြီး ကစားမယ့် Pokemon trainers တွေအတွက် Basic knowledge များ ♫
♪ Pokemon Go စပြီး ကစားမယ့် Pokemon trainers တွေအတွက် Basic knowledge များ ♫
Pokemon Go ကိုစဖွင့်တာနဲ့ Map ပေါ်မှာ အပြာရောင် စတုရန်းတွေတွေ့လိမ့်မယ် Pokestops လို့ခေါ်တယ် အဲ့နေရာတွေနဲ့ နီးလာရင် စတုရန်းကနေ ပိုကီမွန် အလုံးပုံပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။ ဝေးတဲ့ pokestops တွေကတော့ စတုရန်းပဲ။ အဲ့ pokestops တွေကနေ အကောင်ဖမ်းဖို့ extra poke eggs တွေရမယ် battle မှာ revive လုပ်ဖို့ medicine & potions တွေရမယ် အကောင်ဖောက်ဖို့ ဥတွေရမယ်. Pokestop လေးကို click ပြီး အဝိုင်းလေးကိုလှည့်ပေးရုံပဲ။ သူများက လှည့်သွားပြီးရင်တော့ fail ဖြစ်လိမ့်မယ် နောက် pokestop ကို အမြန်ဒိုးတော့။
တချို့ pokestops တွေမှာ ပန်းရောင်ပန်းတွေဝေနေတာတွေ့ရင် အပြေးသွား။ သူတို့က မိနစ် ၃၀တခါ ပိုကီမွန်တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တယ် အဲ့မှာပဲတနေကုန်ရပ်နေရင် အပြိုင်ဖမ်းမဲ့လူမရှိရင် သေချာပေါက် နာရီဝက် တကောင်ရမယ်။ pikachu တို့ mewtwo တို့တော့ မရနိုင်ဘူး။
တချို့နေရာတွေမှာ အစိမ်းရောင် အရွက်တွေပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်နေတာတွေ့မယ် အဲ့နေရာတွေက pokemon အကောင်းစားတွေ တွေ့ဖို့ potential ရှိတယ်။ အဲ့နေရာတွေကို များများပတ်လျှောက်ပါ lol
အပေါ်မှာပိုကီမွန်နဲ့ တာဝါတိုင်ကိုတွေ့လား အဲ့ဒါ gym. အဲ့ gym က ကိုယ့် အသင်းပိုင်ရင် ကိုယ့် pokemon ထားပြီး defend ပေးလို့ရတယ် စစ်ကူပေါ့။ ကိုယ့်အသင်းမပိုင်ရင် သွား fight လို့ရတယ် နိုင်မယ်ထင်ရင်ပေါ့။
အသင်းက player level5ရောက်မှပွင့်မယ် gym ရောပဲ
Team mystic (blue) Team valor (red) Team instinct (yellow) ဆိုပီး ၃သင်းကွဲသွားမယ်. ကျနော်ကတော့ အပြာရောင်
ဖမ်းမိသမျှ pokemon တွေကို ပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ် ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာမိတာတွေက အစ။ အကောင် ၂၅၀အထိ သိမ်းထားနိုင်တယ်။
CP ဆိုတာ combat power ကိုပြောတာပါ။ Gym battles တွေမှာ အရေးပါပါတယ်။ များလေကောင်းလေပေါ့။ ဖမ်းမိတဲ့ pokemon ကို power up ဒါမှမဟုတ် evolve လုပ်ရင် CP တက်ပါတယ်။
ကျနော်စောနကဖမ်းမိတဲ့ sandshrew လေးကို example ထားပြောမယ်ဗျ common pokemon မဟုတ်လို့ပါ ၃ခါလောက် ဖမ်းလိုက်ရတယ်။ တချို့ pokemon တွေက pokeball ၁ခု ထဲနဲ့ဖမ်းရပေမယ့် တချို့က ပြန်ထွက်သွားတတ်တယ်. တချို့ဆိုသူများဦးသွားတတ်တယ်။ pokeball ၃ခါမီးလင်းပြီး မီးငြိမ်းသွားရင် သေချာတယ်ဖမ်းမိပီ၊ ၁ခါမီးလင်းပြီး လွတ်သွားတာတွေတပုံကြီးပဲ။
Pokemon ၁ကောင် ဖမ်းမိရင် stardust (ပုံသေမဟုတ်) ရတယ် candy 3ခု ရတယ်။ power up အတွက် stardust 400 candy 1 ခုပုံသေဖြစ်ပေမယ့် evolve ဖို့အတွက်လိုတဲ့ candy က တကောင်နဲ့တကောင်မတူဘူး. ကျနော့် sandshrew ကို evolve ဖို့ candy 50 လိုတယ်ဆိုတော့ အကောင် နောက်ထပ် ၁၇ကောင် farm ရမယ်။ 17×3=51. Power up ချင်ရင်တော့ ထပ် farm ပေါ့။ weakness and pokemon types တွေကတော့ ကျနော်လဲ မလေ့လာရသေးပါဘူး။
Journal ကတော့ အကောင်ဖမ်းမိတဲ့ details တွေပါပဲ
အကောင်များများဖမ်းရင် experience တက်ပါတယ် pokestops တွေသွားပြီး spin ရင်လဲ 50 xp ရပါတယ်။ Team ခွဲတာတော့ level5ရောက်မှပါ။
Collect လို့ရသမျှ pokeballs တွေ revive medicine & potions တွေကိုဒီမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် pokeeggs and egg incubators တွေအကြောင်းတော့ နောက်မှထည့်ပါမယ်။
Incense ကတော့ ကိုယ်ဘယ်နေရာရောက်ရောက် အဲ့ဒါလေးပစ်ချလိုက်ရင် မိနစ် ၃၀ အတွင်း pokemon ၁ကောင်ကျိန်းသေလာပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် incense ကို level up ရင်ရပေမယ့် store ကနေလဲ poke coins နဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်။ poke eggs တွေ poke balls တွေ potions တွေလဲ ဝယ်လို့ရပါတယ် real money နဲ့ poke coins တွေဝယ်ရတာပါ။
Potion တခုကို hp (health points) 20 ပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Gym battle အတွင်းမှာပါ။ Revive ကကျတော့ battle တိုက်ရင်း သေသွားတဲ့ pokemon ကို ပုံမှန် hp ရဲ့တဝက်နဲ့ ပြန် အသက်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Gym battles တွေကပုံမှန်ဆို6vs6တိုက်ရတာပါ။ revive နဲ့ potions တွေများများသယ်သွားဖို့လိုပါတယ်။
လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ pokemons တွေတွေ့ ရင် vibration ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ bottom right corner က tab လေးကို ဖွင့်ကြည့်ရင် အနီးမှာရှိတဲ့ အကောင်တွေတွေ့မှာပါ။ ဖမ်းပီးသားအကောင်တွေကတော့ ပုံပေါ်ပေမယ့် မဖမ်းရသေးတာတွေကျတော့ blank ပဲဖစ်နေမှာပါ။ ခြေလှမ်း ၃လှမ်းကတော့ ၂မိနစ်လောက်ရှာရဦးမှာပါ။ ခြေလှမ်း၁လှမ်းပဲဆို တော်တော်နီးနေပါပြီ။ တွေ့ရင် vibrate ပါလိမ့်မယ်။
ဖမ်းပီးသားအကောင်လဲ ထပ်ဖမ်းရပါမယ် evolve လုပ်ဖို့ candies လိုပါတယ်။
Pokemon index or Pokedex
ဒါကတော့ pokemon dictionary ပါ ဖမ်းမိတဲ့အကောင်တွေဆို ပုံပြပါတယ်။ မဖမ်းမိပဲ လွတ်သွားတဲ့အကောင်တွေဆို blank ပြပါတယ်။ ကျနော်ဆို ၃ကောင်လွတ်ပါတယ်။ squirtel code no 007 အပါအဝင်။
Abra ကို evolve ဖို့ candies 25 ခုလိုပါတယ်. ၁ကောင်မိရင် candy ၃ခုရတယ် အာ့ကြောင့် စုစုပေါင်း ၉ကောင်ရှာရပါတယ်။ Evolve မလုပ်ခင် CP 92 ပဲရှိပါတယ်။
Pokémon GO Game for iPhone အားရယူရန်
အမျိုးအစား: Android Games , Games , Knowledge
sithu sithu August 9, 2016 at 2:44 PM
install လုပ်မရဘူး honor 442 ပါ